Kuva Mufambisi Uber muDhailand - Careem uye RTA Mazano Ebasa 👳
Kutungamira Kuva Ive Uber Driver mu Dubai & Taxi Driver
Kunze kweJob Vacancies muDubai City
Expatikazi Dubai - Tsvaga basa kuMiddle East
Kuva Ushayi weUber muDhailand
Kuva Ushayi weUber muDhailand. Kuti ave mutyairi weUber mu Dubai. Vanotsvaka Jobho unofanirwa kuve nerevo yakachena yekutyaira. Kune rumwe rutivi, shanda nekambani ye limousine kana basa remotokari mukati Dubai. Uye usvike chidiki chiduku chinodiwa che21. Vanogona kutyaira vanofanirawo kuona vhidhiyo pfupi yekudzidzira. Zvinyorwa zvinodikanwa ndeye rezinesi rechokwadi rekutyaira rekuDubai kuUnited Arab Emirates uye ID yeEmirates kana chiratidzo chekugara. Izvi zvinobvumira mutyairi kuti awane mari nenzira inokodzera ivo.
Nhungamiro Yichikurumidza Yokutanga naUber?
Nhanho No.1 - Bhalisa paIndaneti online
Kungotanga iwe unoda kero kero ye-email uye foni! Zvakanaka, zvino taurira kambani yaUber zvishoma nezvako uye iwe unotyaira, uye kambani ichaita kuti utange.
Nhanho No.2 -Ipapo Isai ID yako uye mamwe mashoko
Sezvo iwe uchifungidzira kuti pane mamwe mapepa iwe aunofanirwa kutevera kuti uenderere mberi. Kune zvinyorwa zvishoma izvo uber kambani inoda kuona application yako isati yaongororwa.
Kana uri mutyairi muDhaibha kana Abu Dhabi muUnited Emirates:
Rakanaka RTA Kadhi
Iwe unofanirwa kuva neEmirates ID yakakodzera
Rakachengetwa RTA Imodziyo Yakanyorwa Mulkiya
Iwe unofanirwa kuva nemufananidzo wefambisi yekufambisa uye uutumire kuInternet company.
Inofanira kunge iri pamberi-yakatarisana, iyo yakagadziridza chinyorwa kusanganisira mutyairi wepiso uye chiso chemafudzi, asina magirazi
Inofanira kuva mufananidzo chete wekutya pasina chimwe chidzidzo munharaunda, yakarongedzwa zvakanaka, uye inotarisa. Haikwanise kuva chitupa chekutyaira kana imwe mifananidzo yakadhindwa.
Nhanho No.3 - Gadzira injini / petroli uye wakagadzirira kuenda motokari!
Ndeipi motokari yakanakira iwe? For sure yakachipa mota diki injini. Uyezve, Ita shuwa kuti inosangana nezvinodiwa zveUber uye zviyero zvinoshanda muUnited Arab Emirates.
Iva munhu akachenjera uye uyeuke nguva dzose !. Kuti iwe uchaita imwe dirham kana iwe uchiramba uchitora pamotokari uchichengetedza pamutengo wakaderera.
Zvisinei, hongu, iwe unogona kuramba uchinyora kunyange iwe usina kukodzera motokari iye zvino. Tarisa yedu Uber cars solutions.
🚕 ZVINOKUDZIDZWA NEVEHICLE
Nhanho No.4 - Shandisa account yako uye ita Uber mari!
Zvino, kana wakwanisa kutevera gwara redu muDubai uye wapedza ese matanho ari pamusoro. Iwe unofanirwa kukwanisa kuwana basa kuUber muDubai. Munguva pfupi iri kutevera Uber inomutsa account yako iwe Unenge wagadzirira kuzoisa account yako nyaya zhinji uchitora 24h kusvika ku48h uye zvirokwazvo uchatanga kugadzira dirham.
Nzira yekuti uve Mutyairi Uber mu Dubai
Kune vazhinji emirates jobs in Dubai. Nekugadzirisa uye nekuzvidzivirira, Uber ndiyo ingangosarudzo yakanakisisa. Kuti uwane mabasa eUber muDhaibha, shanyira webusaiti yeUber. Kuisainyorera kwakajeka sekupedzisa kubhadhara paIndaneti. Kuva Dube Uber muDhailand dzimwe mamiriro ekutora nguva. Kune rumwe rutivi, pane maawa akawanda apo iwe uchatora zvishoma kudarika mashoma mubhadharo.
Asi iwe haufanire kuve nerezinesi yekutyaira tekisi uye iwe unogona kugara uchityaira kune imwe kambani yakadai saKareem tekisi mudunhu reGulf. Saka, chero bedzi iwe uchinge watanga kuva neruzivo iwe uchaona kuita mari yakanaka.
Uber inoshanda sei mu Dubai?
Unogona kuda kuziva mashandisiro aungaita Uber muDubai. Saizvozvo kune nyika dzese, kushandisa Uber, ingo kurodha iyi app, tsvaga mari yako, uye sarudza mhando yeUber kutasva muDubai iwe yaungade. Kubhadhara kunoitwa kuburikidza neapuro uye kuendeswa ipapo. Kune matatu matatu akasiyana eUber muDubai - Mushandisi sarudza ari premium service uye inopa anodhura mota dzekukwirisa zvakanyanya; Uber dema inova iyo yepakutanga Uber sevhisi; UberXL iri yemapoka akakura kana kungoda kudiwa kwemotokari hombe. Izvi zvinoreva kuti Uber Dubai inopa huwandu kubva chiyero kune premium kufamba.
Uber inowanikwa 24 maawa pazuva, mazuva 7 pavhiki. Kushandisa purogiramu, vatasvi vanogona kukumbira Uber chero nguva yezuva kana usiku. Purogiramu yacho icharatidza mutasvi mufananidzo wevatyairi vavo nemashoko emotokari, kuve nekuchengetedza kwemaviri maviri panguva dzose. Iko kunewo mano ekucherechedza mutyairi munguva chaiyo yekuona kuti vachauya rini.
Ivhareji inodhura tekisi muDhaibha inenge yakapoteredza 44 AED (Dirham Emirates yeErabic) ye10 mamaira. Uber Uber, iyi iri pedyo ne28 AED kune imwe nzvimbo iri kure. Ivhareji yeUber mubhadha mu Dubai inotenderera 30-50 AED kweawa.
Ungatora sei Uber, mutyairi?
Iyo Uber foni yefoni kutumira chikumbiro chako chekufambisa kune vatyairi munharaunda yemunharaunda. Mumwe wea driver aya anobva agamuchira basa uye inounganidza iwe kubva kwauri kuenda. Nekuda kwehurongwa uhwu, Uber haikwanisi kukufananidza pamwe nevatyairi. Mushure merwendo rwako, pane mukana wekusheedzera mutyairi wako nekupa mhinduro isingazivikanwe. Uber unogona kushandisa ruzivo urwu kuti uve nechokwadi chekuti basa ravo rinoramba riri padanho rinotarisirwa. Kuva Mufambisi Uber ku Dubai zvakakosha.
Chii chinonzi UberXL?
Uber ine mabasa akawanda. Imwe yemuenzaniso iUber XL. Izvi zvakasiyana zvakasiyana-siyana mumakambani eUber. Uber XL inoshandiswa kwemari yemotokari inokubvumira kuti uite motokari yeSUV uye yakawanda kupfuura yepamusoro.
Chii chinonzi UberXL? Icho chinhu chiri nyore chakaitwa mukambani mukuru mukuru wehama ye uber. Saka sekushanda nekambani iyo iwe uchange uine boka revanhu mune motokari imwe iyo ndeyechokwadi. UberXL inongova yakawanda yakakura yekutasva rudzi rwemashumiro aunogona kupa kune vamwe vatengi.
Iwe unogona zvechokwadi kubatsira vanhu pasina kupisa mari muhomwe yehomwe, UberXL ndiyo sevhisi yemotokari iwe yaunogona kupawo. Paunenge uchishanda muUber XL Iwe unozotorwa vatengi muSUV kana minivan. Mazhinji emota idzo dzinokwana vanhu vanosvika 6-8 saka ndizvo zvazviri yakanaka yepati kana musangano wemhuri.
Kuve sei mutyairi Uber?
Kubva payakatangwa muna Nyamavhuvhu 2013, Uber mukati United Arab Emirates yaenda kubva pasimba pasimba. Ipo ruzivo rwuripo pamhepo pamhepo ruchiratidza kuti Uber inofanirwa kubhadharisa 30% kupfuura tekisi yemazuva ese, imwe data iripo online inoratidza kuti mari chaiyo inobhadharwa naUber inoenderana nedzimwe nzvimbo munyika, uye yakachipa kupfuura 'yakajairika' tekisi iyo chimwe chinhu Uber chinotangira bhizinesi ravo modhi pane, uye vanozvirumbidza nazvo.
Pamusana pemutemo wekutaura kuti vafambisi veUber vanofanira kushanda nekambani ye limousine, vatyairi vanofanira kugovana mari yavo nevanoshandira pamwe neUber, zvichireva kuti havazoiti zvakawanda zvavanogona kana izvi zvisingaitiki. Izvi zvinorevawo kuti vanodhairi vaUber vanowanzo chibvumirano chekushanda seIndia exats, uye uende kuUber munguva shoma. Ichokwadi kuti izvi zvinoreva kuti Uber haisi yega mari yavanogona kutarisira, zvichiita kuti zvive zvakakosha kune vatyairi.
Kusiyana nemitambo yematareji, vatyairi veUber havafaniri kubhadhara mutengo wokubhadhara kuUber kuitira kuti vashande, uye havatarisidzi kushanda maawa. Ne Uber, vatyairi vanozviisa purogiramu yavo uye vanogona, saka, vanoshanda zvakawanda kana zvishoma sezvavanoda.
Tanga Kutya ne Uber
Shandisa Apa: https://www.uber.com/drive/requirements/
Nzira yekutya neUber muUnited Emirates ?. Kambani yeUber ine chaizvoizvo nzira iri nyore kwazvo yekutanga nemabasa avo anoshamisa. Ingoimbira pa webhusaiti yavo uye iwe unogona kuenda!
Uber muDubai ndiyo nzira huru kuve wako pachako bhosi uye ita mari pamusika wakaoma kwazvo senge UAE. Kwete chete iwe uchafara asi vazhinji vevanhu vanokodzera kutyaira neUber. Uye ivo vari kutoita mari neuber kuDubai. Semuyenzaniso, MaIndia nePakistan vari kutoita mari nekushandira uber muDubai.
Muchokwadi, iwe unofanirwa kuziva zvakawandisa kana uchityaira muDubai kana Abu Dhabi neUber. Uye aya maguta inzvimbo dzinoshamisa nekuti panenge paine 24h mukana wekuita mari.
Mamwe Makambani akadai saUber unofanira kuedza kuwana basa naro
Careet Captain (Dubai)
Shandisa Apa: https://drive.careem.com/
Careem Kaputeni ndeimwe kambani yakakodzera kuve nechitarisiko, unogona kushanda chaizvo sezvo mutyairi weUber aine Careem kaputeni.
1. Zvinyora iwe pawebsite yepaiti: Zvadaro gadzirisa fomu iri pamusoro pewebsite iyo iri nyore kwazvo uye inoshandiswa kuva Careet Captain.
2. Apo iwe unogamuchira foni kubva kuboka ravo, iwe unofanirwa kunge uine dzidzo huru. Mushure mokunge maona nezvekushanda kwekambani yekambani yekufambisa kambani inokukoka kuti udzidzise.
3. Kutasva uye kuita mari muDubai. Kana kudzidziswa kwapera, unogona kutanga kuwana mari!.
Tanga ne Careet Captain nhasi!
Shandisa Apa: https://talixo.com/careers/
Talixo kambani bhuku zvino taxi yako muDubai. Izvi ndizvo zvinotaurwa newebsite yavo uye ichokwadi chirevo. NeTalixo iwe unogona kusarudza tekisi yekutyaira, yehupfumi kirasi uye bhizinesi kirasi mabasa mikana.
Chinhu chakanaka chekambani iyi ndechekuti Talixo sangano rinowanikwa mumaguta e949 pasirese. Uye izvo zviri kukupa kutanga kwakanyanya chengeta mubasa rako semutyairi wetekisi. Tinorevei neizvozvo? Kune chikuru chivimbo chekuti iwe uchawana yako mari pane imwe nguva uye mukati mezvinhu zvinoshanda.
Shandisa Apa: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
Zvakanaka, kuti uwane basa neRTA Taxi iwe uchafanirwa kushanda zvishoma zvishoma. RTA tekisi ikambani inoenderana nehurumende. Nekudaro, kushanda ipapo kwakanyanya kunaka uye zvese zvinofanirwa kunge zviri mubhadharo uye nekuchengetedza mabasa zvichapihwa.
Asi kune rumwe rutivi, kuwana basa neRTA teksi zvirokwazvo ichave iri rakaoma basa rekuita. Asi se masosi eexat - Dubai City Kambani timu nguva dzose kurudzira expats kupa kufona kumakambani uye kuvabvunza zvakawanda ruzivo.
Shandisa Apa: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
Yakakwirira-Kirasi mabasa inopa uye yakanakisa taxi tekisiti muUnited Arab Emirates. Kazhinji, kuva Uber Driver muDubai hachisi chinhu chakafanana neDubai Taxi. Neiyi firm, uchave nebasa renguva yakazara uye mune akawanda kesi inoshamisa mota kutyaira. Iyo Dubai Taxi Corporation inopa mota dzakadai saTesla neMercedes mungarava yavo. Saka, imwe yenongedzo iwe yaunofanirwa kuziva: iyi kambani yepamusoro imbwa mumutambo wevashandi vekufambisa vega.
Kana iwe uchinge uchinge uine ruzivo mukuchaya uye kutyaira tekisi. Iwe unofanirwa zvirokwazvo kuvapa foni kana kutarisa ruzivo rwakagadziridzwa pamawebsite avo. Parizvino tinozviziva izvozvo kambani inobhadhara mari yakanaka kwazvo yevanotsikisa vashandi.
Shandisa Apa: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
Imwe Imugwagwa Tekisi ndeyokuHiring muUnited Arab Emirates. Saka, kana iwe uchida kuve chikamu chesangano redu riri kukura. Iwe unofanirwa zvirokwazvo kutaura kune iyi yakasimba. Management of Mumwe mugwagwa tekisi iri kutarisa kubatira vatariri vatsva vevashandi.
The Kambani inogara ichitsvaga vatsva vekunze. Nekudaro, nhengo dzebhizinesi dzenyika dzese dzinogona kushanda semutyairi wetekisi mubhizinesi ravo. Nekudaro, kana uri munhu ane rudo uye akavimbika kubatsira vanhu kuti vasvike kwavanoenda nenguva. Ndokumbira kuti utarise tekisi Yemumugwagwa ikozvino vacancies mu Dubai City.
Shandisa Apa: http://www.safetransme.com/index.html
Akanyatsogadziriswa uye super google yakatenderwa kambani. Vanhu vazhinji vari kushandisa sangano iri. Iyi kambani iri kutarisira kumhanyisa bhizinesi. Nekudaro, hapana nzira yekutsvaga chero chikamu chebasa pane webhusaiti yavo. Asi, kazhinji kutaura, zvakakodzera kuvapa foni uchingobvunza kana vachinge vaine mamwe mabasa semutyairi wetekisi.
Guta Taxi AE (Dubai)
Shandisa Apa: http://www.citytaxi.ae
Iyo Taxi Yekambani kambani yekare. Zvirinyore nekuti City Taxi AE yakavambwa mugore 1983. Kwemakore ekushanda, kambani inoshandira mumamwe masevhisi akati kutakura vanhu kubva kune chero nzvimbo kuenda kuDubai uye Abu Dhabi uye nekune dzimwe nyika. Iyo kambani iri kushandisa mota diki yekufambisa.
Yakanyanya kunaka point yeiyi kambani ndeyekuti ivo vari kuhaya. Unogona kushanyira webhusaiti yavo uye shandisa zvakananga neCV yako webhusaiti. Ingoshanyira kambani yavo kana kuvapa runhare mumunhu. Mamaneja eGuta Taxi achafara kukubatsira iwe kuwana basa semutyairi wetekisi muDubai.
Shandisa Apa: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
Arabia Taxi haina chekuita neKuve Mutyairi weUber kuDubai kana Abu Dhabi asi isu takaisa iyi kambani zvakare pane yedu chinyorwa. Nekuti isu tiri kungotenda t ichakubatsira svikira zvibodzwa zvako zvekutsvaga basa mumusika wakaomesesa webasa muUAE.
Iyi kambani isangano riri kukura muUSA. Parizvino ndivo chete kambani inokwenenzvera kuwana kuteverwa kwakazara yechiremera chekufambisa mumigwagwa muUnited Arab Emirates. Arabia Taxi ikambani yakakodzera kuve nechitarisiko senge avo vanogona kutsvaga basa.
Shandisa Apa: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
Iyi kambani haishande muDubai chete. Kambani zvakanyanya tsika yeArabhu uye nguva dzose kuyedza kuenda mberi nemitemo yese inoshanda muUnited Arab Emirates. Joinha sangano rakadai rinokupa iwe mukana wekusvika zvakanyanya sarudzo yehupenyu hwako uye zviroto zveArabhu.
Shandisa Apa: https://www.shjtaxi.ae/careers
A 100% Sharjah yakatenderwa tekisi kambani. Nekudaro, iyi fosi inoshandawo mukati meDubai naA Abu Dhabi. Sharjah kambani yematekisi inoda Vatyairi vetekisi muDubai uye Abu Dhabi. Asi, iyo UAE Chiedza chekutyaira rezinesi inofanira. Kune rimwe divi, GCC Chiedza chinobata muridzi wezinesi anogona kunyorera. Saka, ita shuwa kuti iwe unenge uine icho mumaoko ako.
Iyi kambani inobhadhara zvakaringana, unogona kuwana AED. 3,000 / - kusvika AED.10,000 / - pamwedzi uri kushanda kupfuura 8h pazuva. Uye kazhinji kutaura, nemakambani akadai seichi iwe unogona kuva nawo. Ndokumbirawo utarise yavo yechirungu webhusaiti vhezheni uye shandisa chete kana iwe uchida kushanda Semutyairi weTekisi.
Shandisa Apa: http://thedriver.ae/contact-us.html
Iyo Kambani yekutyaira ine makore ezviitiko ese pamusoro peUnited Arab Emirates kutakura. Iyi kambani iri kupa inotaridzika uye yakasarudzika chauffeur sevhisi kune iyo UAE yeruzhinji. Saka, zvichienderana nerondedzero iwe unofanirwa kunyorera basa navo.
Iyo kambani yakafanana zvikuru kuber-kambani muDubai. semuenzaniso, unogona kufonera kambani yemutyairi. Uye kazhinji kutaura, ivo vachakutumira iwe kwaunoda kuenda. Ivo vakanyoreswa neDubai's Roads and Transport Authority (RTA). Saka, 100% iri nyore uye chengetedza kambani kwaunogona kuwana yakabhadharwa basa mabasa inopa.
Shandisa Apa: http://www.tawasul.ae/
Tawasul Taxi kambani inonyanya kuve yevashandi vanotaura chiArabhu. Nekudaro, iwe unogona kuwana mamwe anonakidza mabasa anopa. Iyi kambani iri kupa zvakasarudzika sarudzo uye iwe unofanirwa kuve uine rezinesi. Iwe unogona kutaura navo nezvekukupa iwe mota nyowani. Asi nenyaya iyoyo. uchaita mari shoma shoma yaungatotarisira. Nekudaro, nemotokari yako pachako, yakanaka kambani kushanda.
Shandisa Apa: http://indigorentacar.com/contact
Kambani yakanaka yekutanga nyanzvi yekutyaira jobs in Dubai. Indigo Rent A Mota inofara pane yakasarudzika vatengi sevhisi. Icho ichokwadi. Indigo kurenda Car kambani tsika zviri nyore, fadza vatengi vako vafare uye chengetedza vashandi vedu vanofara. Saka, chaizvo zvinoita kunge a kambani yakanaka kwazvo muUnited Arab Emirates.
Zvese zvinoitwa nekambani yeIndigo zvakagadzirirwa kutenderera nekutyaira pamwe nevatengi. Uye zvechokwadi chokwadi zvinangwa izvi nzira chaiyo yekuita bhizinesi. Zvimwe kunze kweizvozvo Indigo inobhadhara kambani yemotokari muAFA inotarisa pakuvandudza kweDubai tekisi yekutyaira pamusika.
Guta 555 Luxury Transport LLC (Dubai)
Shandisa Apa: http://city555luxury.com/about-us/
Iyo City 555 Luxury Transport LLC Kuita imwe yemawebhusaiti akanaka. Iri sangano rinoshanda mu2007. Uye kazhinji kutaura, ndezvemabasa ekutanga kufamba kwemahara emota services in Dubai and Abu Dhabi. Vanhu vanoraira masevhisi avo kunyanya kubva kuhotera yekushanya yevaenzi. Zvakare, nzvimbo dzekutengesa nemarestaurant anotora muAE yese.
Iyo Kambani zvakare inoshanda pamwe nemakambani mazhinji makuru muUAE. Saka, kuwana basa kuchave kunofadza uye kunobatsira kwazvo kune chero vatorwa kubva kunze kwenyika kana vagari venzvimbo kubva Emirates.
Connection Chauffeur (Dubai)
Shandisa Apa: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
Limousine, Sports Cars uye zvinoshamisa mota dzinodhura. Izvi zvese ndezve chauffeur kambani mu Dubai. Iwo kambani chauffeurs anofanirwa kuve akadzidziswa zvakanaka mutyairi nyanzvi. Iyo kambani inotora kudada mukupa chaiyo yakanakisa sevhisi kune vatengi vayo. Saka, zvakakodzera chaizvo kuvapa foni kana ingotumira ivo email nechikumbiro chebasa.
Iyi kambani inopa akawanda masevhisi. Kunyangwe vatengi vavo vanoda kutakurwa kuDubai Airport. Kana kunyange a musangano webhizinesi mune imwe yeA Abu Dhabi mahotera. Uyezve, seminar yebhizinesi kana yeresitorendi yakashambadzirwa, iyi firm inobatsira iwe kuzorora mukati me limousine yavo uye ichafambisa newe munzira yakachengeteka.
Shandisa Apa: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
Imwe kambani iri pane yedu rondedzero ndeye iyo Private Limousine kambani muDubai. Iyo Yakavanzika Limousine UAE sangano rinoshanda nechiratidzo cheDubai. Iwo makuru masevhisi akave akavezwa mumakore ekupedzisira. Saka, kazhinji kutaura, kushanda nemakambani eVIP mabasa epamusoro.
Paanenge achishanda nemamwe makambani emakimine. Vazhinji vevatyairi vachange vachipa hutano hwakakwana huri ku Dubai uye Abu Dhabi. Iyo kambani inopa VIP kumakambani ayo kwemakore anopfuura gumi zvino.
Shandisa Apa: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
Kambani ine BMW Series 7 uye Lexus Es350. Kambani inonyudza zvechokwadi pamusika wekushambadzira wekushambadzira. Royal Smart Limousine kambani ndeye sarudzo yakanaka yekushanda munzvimbo yakasarudzika yekufamba.
Iyi nhengo inoshamisa inhengo yeRashid Al Jabri Group of Companies muGulf region. Iyo kambani yakatangwa mu2002 naRashid Al Jabri. Uye kubvira ipapo ivo vari kukwereta nhamba yakanaka yevashandi.
Kambani yakanaka yekukudziridza yako basa uye ruzivo pachako mumusika wakasarudzika wekufamba. Sangano iri rakavimbika kwazvo, chengetedza kuti ushande. Uye zvakare nyore inowanikwa yekubhadhara vashandi vazhinji vekutakura. Ehe, makambani achiri kukura zvakanyanya nekukurumidza. Uye inoshandisa nharaunda dzekunze pamwe nedzimwe nyika dzekunze.
Shandisa Apa: https://www.swattransport.ae/
Ikambani yakanaka iyo iwe unogona kuwana basa. Wadi Swat Transport kambani haisi kungobhadhara bhizimisi chete. Vari kutarisira kuwana vatasvi uye vanofamba navo mumashamba mabhasi.
Kutakurwa kweWadi ndeimwe yemabhizimusi ekutangisa mabhazi muDubai uye Abu Dhabi. Unogona shanda nesangano iri uye kutyaira bhazi kana minivans. Asi kambani iyi inoshandira inodonhedza muUAE. Saka, kana iwe uchitsvaga emakambani ekuripira mabhazi muSharjah, Dubai uye Abu Dhabi, unogona kunyorera kubasa nekambani iyi.
Shandisa Apa: https://www.limoinuae.com/contact
Limo yekubhadhara motokari kambani ine yepamusoro-kirasi masevhisi. Iyo kambani inopa vashandi vekubuda muDubai. Iwe uchave uine Lexus-Toyota uye zvimwe zvakawanda !. Iyi kambani inofarira kwazvo kambani kuti muchavapa foni. Nzira yakanaka ndeye kungovabvunza nezve nafasi uye vatore nekukurumidza sezvaunogona.
Shandisa Apa: https://orangeauto.ae/contact-us/
Google mapepa anoda kambani yemagetsi emagetsi. Unogona kuzviongorora kuongororwa pamusoro pemotokari yeganda mune yavo google yangu bhizinesi chimiro. Kambani kazhinji inotaura iri kufamba chaizvo muAU. Makambani ekufambisa akadai seakakwikwidza kuUber muUnited Arab Emirates. Ivo havazi zvavo kujairika mota bhiza asi ndichiri kukosha kunyorera basa.
Usakanganwa nezveUber Anodya (Dubai)
Shandisa Apa: https://uber.com/drive/delivery/
Uber Inodya imwe chikamu cheUber Driver mabasa mu Dubai. Iwe unogona kushandira maketani eresitoreji somuenzaniso Mc.Donald's kana Pizza Hut uye kuendesa zvokudya kune vane nzara apo iwe uchaita mari yakanaka.
Kuti uwane rudzi urwu rwebasa iwe haufaniri kunge uine lairi yekutya !. Nokuti unogona kuzviita pane chikwata chemudhudhudhu kana kunyange pabhasikoro uye iwe uchawana zvakakwana pashure pemwedzi mishomanana yebasa ikoko !. Saka, imwe imwe nzira yakanakisisa yekuva Dhiyabhorosi Uber mu Dubai.
Shandisa Apa: https://www.olacabs.com/careers
Ola chikumbiro chekubhadhara motokari uye ikozvino bhizinesi hombe. Iyo kambani inotenda kuti kuvandudzwa kwemusika wekufamba kwakakosha. Mushandi wekubhadhara mota Ola anosanganisira zvinangwa zvakakura zvaOla uye tsika. Kunyanya iyo kambani iri kugadzirisa bhizinesi rakanaka muUK neIndia. Kumiswa kwemotokari kwaOla kunokurudzira vese vevashandi vayo kuti vaite bhizinesi rekuita nekufamba kwakanaka kwazvo.
Seimwe yemakambani makuru epasi rose ekugovana muvashandi vekushanya vega. Ola yekumhanyisa mota inotora kudada nekuve nyanzvi, yekuyedza uye bhizinesi rekutanga rakatenderedza pasirese!.
Shandisa Apa: https://www.gocatch.com/
Iyo GoCatch kambani ndeye Australia yekutanga tekesi-kutyaira basa. Neiyi kambani, isarudzo dzinoverengeka dzaunogona kutyaira mota yako. Semuenzaniso hupfumi mutyairi pamwe netaxi network mutyairi kana kunyange premium mutyairi. Nekudaro, iyi kambani zvakare kupa mubatanidzwa wakanaka. Kana iwe uine yako ngarava iwe unogona kuhaya ivo kunze kwevashandi vako uye motokari.
GoCatch kambani webhusaiti inoratidzira iyo huru ngarava yevakanyoresa teksi vatyairi vane metered matekisi muAustralia. The kambani yakakosha chaizvo kuti uwane basa. Saka, kana iwe uchitsvaga mhando yemabasa muUber Yemukati. Iwe unofanirwa kunyorera pa Go Catch webhusaiti muAustralia.
Shandisa Apa: https://www.kapten.com/
Kapten kambani inoshanda kusvika pari zvino mune nyika shoma. Semuenzaniso, iwe unogona kuvawana muFrance Paris, Lyon naCannes. Zvakare, Kupenya kwezuva Portugal muLisbon neSwitzerland kuGeneva. Izvi kambani iri kushanda mumusika inokwikwidza zvikuru.
Ivo vatyairi vanodzidziswa nehunyanzvi uye kutungamirirwa. Kupa zvakanakisa vatengi masevhisi evashandi vehunyanzvi. Ndichiri kushanda nekambani iyi basa revatengi rive chinhu chikuru kune ako mabasa.
Nharaunda, inoshanda uye yakasiyana-siyana yevashandi.
Shandisa Apa: https://gett.com
Gett Taxi ikambani iri kukura uye musika mukuru kwavari ndeyeIsrael, Russia, United Kingdom neNew York. Nekudaro, iyi kambani haina kugumira kune idzi nzvimbo, nekuti ivo vari kutarisa kukura mune ramangwana. Saka, iwe unofanirwa zvirokwazvo maneja kushandisa pane yavo webhusaiti chikamu chikamu uye vakatarisa vakagadzirisa chero hunyowani hutsva, semuenzaniso, Dubai kana Abu Dhabi.
Shandisa Apa: https://cabify.com/en/drivers
Drive with Cabify. Nhamba yakakurumbira kambani pasi pose !.
Iyi kambani ndiyo yekutanga sarudzo yemari, nhamba yekutanga kuchengetedzeka. Uye kwazvo kambani yakakurumbira iyo iri kubatira vanoenda kunze kwenyika. Iwe unogona kubatsira kukwira nevanhu kuenda kuairport kana kumusangano webasa uye kuita mari padivi.
Kuita mari mubhizinesi iri kuri kutaura kunobatsira vanhu kusvika kubasa kana kudzoka kumba. Cabify bhizinesi ndeyevashandi, vatengi kana makwati. Chero ani anokwanisa kunyorera uye kuita mari.
Kushanda paCabise vashandi vanoziva chaizvo kuti mabhizinesi anofamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvakasiyana uye kugadzira kambani padanho it tichango batsirwa iwe pachako.
Shandisa Apa: https://www.ingogo.com.au/driver
Ingogo inokwanisa kukwanisa kuti iwe magetsi ekugadziriswa kwemakadhi ekubetsera anokubatsira iwe kuunganidza nekutsvaga mabhuku kusvika kumaawa 48 mberi kuitira kuti ugone kuronga zuva rako panzvimbo iyo. Iwe unogona kudzokorora mitemo kubva kuvanejaja vebhizimisi uyewo kubva kuvashandi vekambani vanobhadhara mari yakawanda.
Iyo kambani inobva kuAustralia uye yakawanda yepisitori centre nevanhu vechokwadi kuti vabatsire varipo kwauri. Saka, iwe unofanira kufunga nezvekambani yeIngogo uchitanga
kutsigira nzvimbo muSydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane nePerth. Tine tariro kuti iwe unoda mabasa avo.
Shandisa Apa: https://www.itaxi.pl
Iyi kambani kambani yakanyanya kufarirwa ine kambani yevatyairi. Iwe unogona chaizvo kuwana kambani yakanaka muPoland sezvo ikozvino hupfumi huri kuwedzera. iTaxi ndeye mahara uye iri nyore kushandisa chinyorwa chekushandisa muPoland. Uye iyi kambani inokutendera kuti uvashande muPoland. Nekudaro, iwe unofanirwa kutaura mutauro wechirungu.
Ikambani yeTaxi ndiyo maridhi anozivikanwa zvikuru muPoland uye inoshanda mumaguta ose emapurisa anopa Krakow neWarsaw uko vazhinji vevanhu vanoziva nevatorwa neChirungu.
Iyi kambani ndiyo chete kambani iyo ichakupa hanya yekushandisa uye iwe uchaita mari neiyi nzira. Iyo iTaxi inobatanidza vashandisi chete nevatyairi vakavimbika uye vakavimbika mumusika wekutakura wekufambisa. Saka iwe unogona kuramba wakadzikama uye ita chinhu chako uchisvika kunzvimbo yekuenda. Kugadzira mari muPoland uye tumira iyo kune yako mhuri kunze kwenyika.
Dhayisa neRyft (International)
Shandisa Apa: https://www.lyft.com/driver
Rhifty is a company in America and popular in United States and Canada. Zvisinei, hazvirevi kuti kambani iyi haifaniri kutamira kuMiddle East.
Lyft iri kuva nehurongwa hwakanaka kwazvo kune vatyairi vavo uye zvechokwadi, hwakanaka sangano rekushanda kana vatamira kuDubai City. Parizvino tinoziva kuti kambani ye lyft iri kutsvaga kutamira ku UAE asi kambani haisati yaratidza musi chaiwo.
Ropa rusununguko mune zvese mune zvese zvaunoita, kubvumira basa rako kuve rakanaka uye rakagadzikana. Kugadzira pasi-kuputsa mazano uye kutanga hunyanzvi uye kusimudzira kufambira mberi mari muUS neCanada kunoita iwe munhu akanaka izvo zvechokwadi.
Shandisa Apa: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
Lecab Taxi iyo imwe kambani yeFrance yakafanana neUber mu Dubai. Imwe kambani yeLeCab ndiyo inotungamirira basa rekufambisa yeparisian yega yega yevanhu vanogona kugara muParis chete. Nokudaro, LeCab yakasika basa iro munhu wese weParis anoda kushandisa: akasununguka, akavimbika uye anotengesa.
Iyi kambani yakavambwa mu2012 uye kubvira ipapo kambani yakagadzirwa pane mamwe mazano mashoma ari kubatsira vanhu kushandisa masevhisi akadai setaxi uye uber. LeCab inopa Paris imwe nzira kune yetekisi nemotokari dzemunhu. Uye kukura zvakanyanya zvakare nemutauro wechirungu.
Shandisa Apa: http://www.bitaksi.com/en/
Kwakareruka kwazvo kutasva, Bi Taksi iri kambani ye kusimudzira kwemangwana. Iyi kambani ndiyo yakanakisa taxi tekisiti muIstanbul uye Ankara kuTurkey. Kunyangwe iwe uripi iwe unogona kunyorera kana kunyange kuuya kuTurkey uye kuita mari neBiTaksi.
Ine kambani yakadai seiyi, kazhinji kutaura, unogona kukumbira rumwe ruzivo uye utarise ichisvika chaiyo-email ine mabasa kupihwa. Uye vatengi vako vanokwanisa kubhadhara nekadhi rechikwereti kana mari. Iyo kambani zvakare inotora vakaremara vatengi saka, iwe unozogona kuita mari yakawanda.
Shandisa Apa: http://talent.didiglobal.com/
Didi anoshanda mune dzinoverengeka nyika, Australia, Brazil, China pamwe Japan ne Mexico. Saka, izvi zvakakodzera sangano kuve nechitarisiko. Vari kutsvaga maneja ane ruzivo, vakapedza kudzidza kuyunivhesiti uye maInternational.
Didi tekisi yakanaka yekufambisa kambani yekubuda. Iwe unofanirwa kutarisa mabasa avo nekuti kune akawanda anofarira mabasa anopa.
Tora Transfer.com (International)
Shandisa Apa: https://gettransfer.com/en/carrier/new
Iyi kambani parizvino iri kufambisa hofisi yavo kuti itange kushanda muDubai uye Abu Dhabi. Saka, chaizvo, iwe unofanirwa kuve nechitarisiko pawebsite yavo. Isu tine tariro yekuti kambani iyi ichawanikwa muDubai munguva pfupi iri kutevera. saka chengeta rako rakavhurwa nemushop.com.
Iyo kambani ichave yakafanana zvakadai sekuti Uve Uber Driver mu Dubai iwe uchangotora shoko uye ugovera zvinhu kana munhu wemunhu kune nzvimbo yakasarudzwa.
Tora vashandi vanoendesa kuti vanzwisise kukosha kwekubuda kunze-kwakatarisana, kushanda nesimba uye vanofarira nezvevashandi vekufamba vega vega. Saka, Tora Kutapira.com inobatsira iwe zvechokwadi kushandira iko kuzadzisa iwo musimboti kuona uye kuvaka kuvaka kwevanhu bhiriyoni.
Shandisa Apa: http://www.easytaxi.com/
Taxi Rakareruka yakawanda kupfuura yeColumbia, Argentina neMexico kambani inoenderana neshandiso. Nekudaro, zvakafanira kuti utarise iwo mapeji avo. Chete kambani iyi inogona kuvhura hofisi mukati Dubai kana Abu Dhabi mumakore anotevera uye enda kuMiddle East musika.
Tarisa maitiro avo, ndiani anoziva vanogona kunge vaine mamwe mabasa evashandi vane ruzivo kupota nyika. Uye iwe unogona kunyange kufarira kutanga kushandira kune imwe nyika kune Easy Taxi.
Tora Taxi (International)
Shandisa Apa: https://grab.careers/
Kambani Yakanaka! Akatakura motokari yekutakura motokari inopfuura kupfuura iyo inotungamira yekukwira-oda application mukati Southeast Asia. Iyo kambani ibhizinesi rekunze rine zviwanikwa zvikuru. Iyo kambani inoshandisa iyo yazvino dhata system uye yakanyanya tekinoroji yekuvandudza zvese kubva mukufambisa kuenda kumabhadharo uye logistics muSoutheast Asia
Kubata kambani iri kushanda pamwe chete nemishonga yehurumende nemarongwa. Sezvo pamwe nevatyairi vavo, vatasviki uye vanobatsira vanofara. Zvose zvinoratidzika sezvakanaka pakushanda zvakanaka mune kambani iyi.
Kubata teksi inomirira kuzarura unhu hwechokwadi hweAsia nzvimbo nekubatsira vanhu Kuve Mutyairi Uber mu Dubai (rudzi rwe) rudzi rwebasa.
Ivo vari kugadzirisa matambudziko anotarisira kuwanda kufambira mberi. Kana iwe uchigovana chiratidzo chekambani cheKutyaira Southeast Asia Forward, nyorera kuti ubatane nechikwata chavo nhasi.
Shandisa Apa: https://careers.taxify.eu/
Taxify ikambani yechipiri ichangobva kuber. Taxify kambani iri yakanaka chaizvo kukwikwidza Uber. Kazhinji kutaura, vanhu vazhinji chaizvo vanoshandisa iyi kambani kutenderera nyika. Kana isu tikatora uyu murongi uye isu tichafananidza iyo nekambani yeUber. Chaizvoizvo uchawana yakanaka kwazvo kukura sangano kwaunogona zvakare kuwana basa muUnited Arab Emirates. At the Moment iyi Kambani iri kuwana Zvakawanda Kupfuura Chechipiri-Ruoko kugadziriswa.
Imwe pfungwa yakangwara yeiyi Kambani kuti chiitiko chisiri kushandisa chero Chikwereti Kadhi Kana iwe usipo newe chero nzira dzekubhadhara dzaunogona kutaura kazhinji, zvakadaro pfuurira kutyaira uye kubhadhara iyo mari gare gare. Saka kana tichienzanisa kambani ino nemamwe makambani ematekisi tichataura izvi zvirokwazvo inzvimbo yakanaka yekutanga kushanda nayo.
Iyi kambani iri pamusoro penyika dzeEuropean Union muEstonia ivo vane hofisi yavo yemusoro ipapo. Asi kana tikadzitora ivo vari kushanda kune dzimwe nyika muIndia United States of America Canada uye nyika zhinji muEuropean Union. Saka kana uchitsvaga mabasa kunze kwenyika kambani iyi zvirokwazvo nzira yakangwara yekuwana basa.
Usati Waenda? - Zvimwe Zvinoda Ku Dubai!
MuDhaibha, zvinodzokorora zvikwangwani zvinowanikwa paDhailand yekutyaira mvumo yemhosva kubva kune mhosva dzakaitwa paunenge uchityaira. Kana iwe uri kufunga nezvekuva mutyairi weUber, iwe uchada kufunga nzira yekuongorora kuti ndezvipi zvingave zvisingakoshi iwe unayo. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekuongorora mabhuku enyu kana kutaurirana neRoads & Transport Authority vanobudisa mabhizimisi ekufambisa. Kuva Dube Uber mu Dubai nekambani yedu iri nyore zvikuru.
Saka, kana uri kutsvaga a nzvimbo yakanaka yebasa. Nokuti kunyange kuwana mutyairi mukana. Unofanira chengetera nzvimbo yebasa rekushandisa. Uye kubva ikoko vanowana basa rakakwana kune vanodhairi. Rombo rakanaka.
Tariro iwe uchawana Driver jobs mu Dubai
Zvisinei, isu tava kunyoresa Driver Job muUAE
Tsvaga Job muDha Dubai nekambani yedu zvinoshamisa iwe unogona kuwana iyo kurota basa nenzira yekutsanya nekuisazve purogiramu kune kambani yedu.
Ingoisa zvinyorwa zvakare pano uye tanga new Driver Job mu Dubai.
Upload Resume Kunokurumidza Kukura Guta Pasi Pano! - Dubai City Company.